Part Of zeRoTraSh: ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉
ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်မရေးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ အလုပ်မအားလုို့ လှည့်ကုိုမကြည့်အားခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ နှစ်လဲကုန်ပြီဆုိုတော့ နှစ်တုိုင်းကျွန်တော် ရေးနေကြ စာရင်းချုပ် ပုို့စ်လေးတော့ ရေးမှ ဖြစ်မယ်ဆုိုပြီး ရေးလုိုက်ပါတယ်။ နှစ်တုိုင်းကျွန်တော် ဒိုင်ယာရီဆန်ဆန် ဒီပုို့စ်မျိုးရေးတာ သိတဲ့အတုိုင်းပဲ အခု ၂၀၀၉ အတွက်လည်း ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ကုို ရေးပေးလုိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် နှစ်စဉ်နှစ်တုိုင်း စာရင်းချုပ်ရင် အရင်းပြုတ်ဆုိုသလုို မကောင်းတာတွေကများနေတတ်တာကုို ဖတ်ကြရတဲ့ မောင်နှမတွေ ဒီနှစ်တော့ စိတ်ချမ်းသာစရာ များများဖတ်ရမှာပါ။ ဘာလုို့လဲဆုိုတော့ ၂၀၀၉ က ကျွန်တော့်အတွက် ကောင်းတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာခဲ့လုို့ပါပဲ။ ကဲ စလုိုက်ကြစုို့ . . .
မှတ်မိတယ် မဟုတ်လား ၂၀၀၈ တုန်းက ကျွန်တော် Man of the Year ရထားတာလေ။ အရှိန်က မကုန်သေးဘူး ဇန်နဝါရီလမှာ မနှစ်တုန်းက လက်ကျန်စာရင်းတွေ ဖြတ်ပေးနေရတယ်။ လုပ်ငန်းကလဲ ရပ်တော့မယ်။ စာအုပ်ထုတ်တဲ့ ကိစ္စကတော့ သေချာပြီ ဒီလကုန်ရင်ရပ်ပြီဆုိုတာ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးထိတဲ့ Recession ကျွန်တော်လဲပါတာပေါ့။ ဝန်ထမ်းလဲ လျော့ရတော့မယ်။ ဘယ်လုိုလုပ်ရမယ်ဆုိုတာ တွေးတောင် မတွေးချင်တော့လောက်အောင်ပဲ။ လူလျော့လုိုက်ရင်ရော အဆင်ပြေမှာလား ဆုိုတဲ့ မေးခွန်း ကျွန်တော်ကုိုယ့်ဘာသာ မေးပြီး ကုိုယ့်ဘာသာ ပြန်မဖြေရဲဘူး။ ကဲ မတတ်နုိုင်တော့ဘူး လျော့ရတော့မှာပဲ စပြီးလျော့တယ်။ ၁၄ ယောက်လောက်ရှိတဲ့ ရုံးကနေ ၇ ယောက်လောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ မရှိမဖြစ်လူတွေပဲ ကျန်ခဲ့တယ်။ စာရင်းတွေမှာ ပေါ်နေတဲ့ ပေးရန်ရှိတွေက ရဲရဲတောက်ပြီး မြင်မကောင်းဘူး။ ဒီနှစ်တော့ ငါဘဝများပျက်မလားဆုိုပြီးတွေး မိလောက်အောင် ဇန်နဝါရီလဟာ ကျွန်တော့်ကုို အသက်ရှူကျပ်စေပါတယ်။
ပုိုဆုိုးလာပါပြီ။ လုပ်ငန်းနှစ်ခုထပ်ရပ်သွားတယ်။ ပုိုက်ဆံဝင်စရာ မရှိတော့လောက်အောင်ပဲ။ ဒီကြားထဲ Mistine နဲ့ စာချုပ်ရှိတော့ ကြော်ငြာတစ်ခုရုိုက်ပေးရသေးတယ်။ အဲဒါလဲ အဆင်မပြေပါဘူး။ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ Mistine က ယိုးဒယားတွေနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့အကြီးအကျယ်သတ်ရလုို့ပါ။ စိတ်ကုန်စရာကောင်းလောက်အောင် အောက်တန်းကျတဲ့ ယုိုးဒယားတွေလုို့ မြင်ပါတယ်။ သောက်ဂရုလဲမစုိုက်ချင်တော့ဘူး။ customer မုို့လုို့ သည်းခံချင်တဲ့ စိတ်လဲမရှိတော့ဘူး။ ဗမာကုို နှိမ်ချင်တဲ့ ဒင်းတုို့ကုို ဦးအောင်ဇေယျလုပ်သလုို လုပ်ရပါတော့တယ်။ ဗျင်းသည်ပေါ့။ နင်က ယုိုးဒယား ငါက ဗမာ လာထားဟဲ့။ ထမထုိုးတာတစ်ခုပဲ ကျန်ပါတယ်။ ပက်ပက်စက်စက်ပြောလွှတ်လုိုက်ပါတယ်။ အားလုံး အံ့သြကြတယ်။ မောင်ဇီးရုိုးတုို့ သဘောကောင်းတယ်ဆုိုပြီး ဘာဖြစ်သွားတာလဲပေါ့။ ပုိုက်ဆံရမယ့် ကိစ္စကုိုဘာဖြစ်တာလဲပေါ့။ ပိုက်ဆံက ပုိုက်ဆံပဲ လူမျိုးရေးက လူမျိုးရေးပဲ။ ငွေနဲ့ သိက္ခာဘယ်တော့မှ ကျွန်တော်မလဲပါဘူး။ အဲဒီ့အတွက် ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လုို့ ရပါတယ်။ ယုိုးဒယားတွေ နောက်တော့ အပြင်မှာ ကျွန်တော့်အတင်းပြောကြပါတယ်။ ငါတရားစွဲရမလားလုို့ လှမ်းမေးတော့မှ ပါးစပ်ပိတ်သွားပါတယ်။ တကယ်တော့ တရားစွဲတာထက် သွားပြီးတောင် ကုိုယ်တုိုင် ရုိုက်ပစ်လုိုက်ချင်တာပါ။ ဖေဖေါ်ဝါရီလကုန်ရင်တော့ အလုပ်ကနားပြီလုို့ ရှယ်ယာရှင်တွေအားလုံးကုို ကြေငြာလုိုက်ပါတယ်။ အားလုံးကလဲ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကုို ရပ်တော့မယ်လုို့ ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ရုံးမှာ last briefing ပေးခဲ့ပါတယ်။ အားလုံး စိတ်မကောင်းကြပါဘူး။ တချို့ဝန်ထမ်းတွေ ငုိုကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ စိတ်မကောင်းတာကလွဲပြီး ဘာမှ မတတ်နုိုင်ပါဘူး။
ရုံးကုို စာရင်းသိမ်းဖုို့ပဲ သွားပါတော့တယ်။ လက်ကျန်အလုပ်တွေကုို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက လုပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာမှ မလုပ်တော့ပါဘူး။ ပုံမှန်လုပ်တာဆုိုလုို့ အရက်သောက်တာပဲ ရှိပါတော့တယ်။ လူများကျပြီဆုိုရင် ရပ်ကုိုမရဘူးဆုိုတာ ဟုတ်မှာပါ။ ဘာအလုပ်လုပ်လုပ် အဆင်ကုိုမပြေတော့ပါဘူး။ အမေကတော့ပြောပါတယ် အဆင်မပြေလဲ ထုိုင်သာနေပါ ငါ့သားရယ်တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် တကယ်ထုိုင်နေပါတယ်။ ဘာမှ မလုပ်တော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းက မသိတာရှိလုို့ လှမ်းမေးရင် ဖြေပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မွေးနေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်လုို ကျော်သွားမှန်းတောင် မသိလုိုက်ပါဘူး။ မတ်လကုန်ခါနီးမှာ အဖေကမေးပါတယ် ကျောင်းပြန်တက်မလားတဲ့။ စိတ်ထဲ တမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော် စဉ်းစားဦးမယ်ဆိုပြီး သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ အဖြေမထွက်လာပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေကလဲ ကျွန်တော့်ကုို နားနားနေနေ နေပြီး အလုပ်ပြန်လုပ်ဖုို့ ပြောပါတယ်။ ကျောင်းတက်မယ်ဆုိုလဲ တက်ပေါ့လုို့တော့ ပြောကြပါတယ်။ ဒီအတုိုင်း ထုိုင်နေတာထက်စာရင် တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပါလုို့ ပြောတယ်။ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်လုိုက်ပါတယ် ကျောင်းပြန်တက်မယ်ဆုိုပြီး စာပြန်ဖတ်ပါတယ်။ မတ်လကုန်ခါနီးမှာ စာဖတ်တဲ့အလုပ်ရပါတယ်။
အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီး တနေ့တနေ့စာဖတ်နေပါတယ်။ ရုံးကုိုလဲသွားစရာ မလုိုတော့ပါဘူး။ စာရင်းလဲပိတ်ပြီးပြီ လုပ်ငန်းလဲ ဖျက်သိမ်းပြီးပြီဆုိုတော့ အားလုံးပြီးပြီပေါ့။ သင်္ကြန်ကုိုလဲမပျော်တာ နှစ်တော်တော်ကြာပြီ အပြင်ထွက်ချင်စိတ်လဲ မရှိပါဘူး။ ဘာမှမလုပ်ပဲနေနေတုန်း ပုဂံမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့်အဒေါ်တစ်ယောက်က သူ့ဆီလာပြီး နားပါလုို့ခေါ်တယ်။ ပုဂံကုိုသိပ်သဘောကျတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပုဂံမှာ ခေါင်းဆေးရင်းလာနားစေချင်သတဲ့။ ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောပဲနေပေမယ့် ကျွန်တော့် အဖေကတော့ မိသားစုလုိုက်သွားရအောင်လုို့ ပြောလာပါတယ်။ ဒီလုိုနဲ့ တမိသားစုလုံး ပုဂံမှာ ၂ ပတ်ကျော်လောက်သွားနေလုိုက်ပါတယ်။ ပုဂံရောက်တော့ ကျွန်တော်စိတ်ကြည်လင်လာပါတယ်။ တနေ့တနေ့ ဘုရားတွေကုိုသွား စာဖတ် ညကျရင် အဖေနဲ့ ဘီယာသောက် နေရတာပျော်စရာပါ။ မန္တလေးကမိတ်ဆွေတွေကလဲ ကျွန်တော်ပုဂံရောက်နေတယ်ဆုိုလုို့ လာတွေ့ကြပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် ပုဂံမှာနေတုန်း အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါကလဲ ကျွန်တော့်အဒေါ်နဲ့ အဖေက ကျွန်တော့်ကုို နုိုင်ငံခြားသွားပါတော့လုို့ ပြောလာတာပါပဲ။ ကျောင်းတက်ချင်တက် မတက်ချင်လဲနေ အလုပ်လုပ်ချင်လဲလုပ် မလုပ်လဲပြသနာမဟုတ်ဘူး အဓိကက စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်အောင်ရယ် အတွေ့အကြုံအသစ်ရအောင်ရယ် ဆုိုပြီး ကျွန်တော့်ကုို လွှတ်တာပါ။ ကျွန်တော် မသွားချင်ဘူးပြောလုို့ ၃ ရက်ဆက်တုိုက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ပုိုက်ဆံကိစ္စဘာမှ စဉ်းစားစရာမလုိုဘူး လုပ်ချင်တာလုပ် အဓိကကသွားဖုို့ပဲလုို့ ဆုိုလာပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေက ကျွန်တော့်ကုို နုိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်စေချင်တာ ငယ်ငယ်ထဲကပါလုို့ ဆုိုလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အများနဲ့ တစ်ယောက် ဖြစ်လာလုို့ ကျွန်တော့်လျော့လုိုက်ပါတယ်။ သွားမယ် ပထမဆုံး စင်ကာပူကုိုသွားမယ် ဟုိုမှာ ကျောင်းတွေ အလုပ်တွေတစ်ချက်ကြည့်မယ် မကြိုက်ရင် နောက်တစ်နုိုင်ငံကူးမယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်သွားချင်တာ လန်ဒန်ကုိုပါ ဒါပေမယ့် ဗီဇာကမလွယ်လုို့ လွယ်တဲ့ စင်ကာပူကုိုပဲ သွားမယ်လုို့ ဆုံးဖြတ်လုိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ပုဂံကပြန်ရောက်တာနဲ့ ချက်ခြင်းသွားမယ်လုို့ ပြောလုိုက်လုို့ အားလုံး မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော် မမှုပါဘူး ကုိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်မှာပါ။ ဒီလုိုနဲ့ ဧပြီနောက်ဆုံးပတ် ပုဂံကနေ ရန်ကုန်ကုို ပြန်လာပါတယ်။
မေလမှာ နုိုင်ငံခြားသွားဖုို့ အဓိက စီစဉ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကုို ပြောတော့ အံ့သြကြပါတယ်။ ဘယ်သူကမှတော့ မတားပါဘူး။ သွားပြီး လုပ်ချင်တာလုပ်လာခဲ့ပေါ့တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ လုပ်ချင်တာလုပ်မှာပါ။ ဒီလုိုနဲ့ မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ညဘက်မှာ Silk Air နဲ့ စင်ကာပူကုိုရောက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ယောက်ဖတွေ လာကြိုကြပါတယ်။ ရောက်ရောက်ခြင်းဇာတိကပြပါတယ် သောက်မယ်ပေါ့။ ဒါတော့ အကျယ်တဝင့်မပြောတော့ပါဘူး သိချင်ရင် စင်ကာပူသွား တောလား ၁ နဲ့၂ ကုို ပြန်ဖတ်ကြည့်လုိုက်ပါ။ စင်ကာပူမှာနေတယ် ဘာမှ မလုပ်ဘူး သောက်တယ်စားတယ် လျှောက်သွားတယ်။ သွားစရာကုန်သွားတဲ့အထိ သွားပါတယ်။ တုိုင်းပြည်သေးသေးလေးမုို့ ဘယ်မှသိပ်သွားစရာမရှိသလုို အားလုံးကလဲ အလုပ်နဲ့ဆုိုတော့ တစ်ယောက်ထဲ ငေါင်တောင်တောင်နဲ့ပေါ့။ လကုန်တဲ့အထိ ဒီလုိုပဲနေပါတယ်။ ကျောင်းတွေစုံစမ်းကြည့်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ် တက်မယ်ဆုိုရင် သြဂုတ်မှာစတက်လုို့ရပါပြီ။ အဲဒီ့အချိန်မှာ အမေရိကားမှာရှိတဲ့ အဒေါ်က ဖုန်းဆက်ပြီး သူ့ဆီမှာ ကျောင်းလာတက်ပါလုို့ပြောလာပါတယ်။ ကျောင်းရွေးဖုို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တနေ့တနေ့ ကျောင်းရွေးနေတာနဲ့ အချိန်ကုန်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ သုငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်သွားဖြစ်တာကတော့ ပျော်စရာပါပဲ။
ကျွန်တော် စလုံးမှာ နေရတာ ပျင်းလာပါပြီ။ ကျွန်တော့် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက သူ့ကုမ္ဗဏီက သူ့သူဌေးက ကျွန်တော်နဲ့တွေ့မယ် ပြောလာလုို့ သူတုို့ရုံးကုိုသွားလုိုက်ပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းပါတယ် သူတုို့က ကျွန်တော့်ကို ဧည့်ဝတ်ကျေကျေ ဧည့်ခံပြီး စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းလုပ်မလားလုို့ မေးလာပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ လုပ်မယ်လုို့ပြောလုိုက်တယ်။ အဲဒီ့လုိုနဲ့ ကျွန်တော် ဇွန်လထဲမှာ မီတင်တွေနဲ့ အချိန်ကုန်ပါတယ်။ မီတင်ကတော့ တစ်ပတ်မှ တစ်ခါပါ ဒါပေမယ့် ပြောဖုို့ပြင်ဆင်ရတာ ကြာပါတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော်တုို့ သဘောတူညီမှုရပြီး လုပ်ငန်းစဖုို့ ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်မြန်မာပြည် ပြန်ရတော့မှာပါ အလုပ်ကုို ကုိုယ့်နုိုင်ငံမှာပဲ ပြန်လုပ်ရတော့မှာပါ လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခု ပြန်စခွင့်ရပါပြီ။ အဲဒီ့အချိန်မှာ ယုိုးဒယားမှာရှိတဲံ ကျွန်တော်နဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါးလောက် မတွေ့ဖြစ်တဲ့ ဦးလေးက ကျွန်တော့်ကုို တွေ့ချင်တယ်လုို့ ပြောလုို့ ကျွန်တော် ရန်ကုန်ကုိုတန်းမပြန်ပဲ ဘန်ကောက်ကုို ၅ ရက်ဝင်နားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဘန်ကောက်မှာ ပုိုပျော်ပါတယ် :P ပျော်မှာပေါ့ နေ့တုိုင်းသောက်မှောက် လျှောက်သွားနေတာကုိုး။ ဘန်ကောက်မရောက်ခင်ကထဲက ရန်ကုန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေကုို အကူအညီတောင်းပြီး ရုံးခန်းအသစ်ဖွင့်ဖုို့ နဲ့ ဝန်ထမ်းရှာတဲ့ကိစ္စတွေကုို ကြိုပြီး စီစဉ်ခုိုင်းထားရပါတယ်။ ဘန်ကောက်ကပြန်ရောက်တော့ နောက်လ အလုပ်စတော့မှာ ဖြစ်လုို့ စီစဉ်စရာရှိတာတွေ ရုံးခန်းငှားတာတွေ ဝန်ထမ်းခန့်တာတွေ ချက်ခြင်းလုပ်ပါတယ်။ အဲဒီ့လုိုနဲ့ ဇွန်လကုို ကုန်လွန်လာပါတယ်။
ရုံးခန်းလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဝန်ထမ်းအသစ်တွေလဲရပါပြီ ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစပါပြီ၊ အလုပ်က အသစ်ဆုိုတော့ နည်းနည်းတော့ ပင်ပန်းပါတယ်။ စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းနဲ့ သူ့သူဌေးလဲ ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တုို့ ဆက်ပြီးလုပ်မယ့် ကိစ္စတွေကို တုိုင်ပင်ကြပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ လုပ်ငန်းအသစ်မှာ စိတ်ကုိုနှစ်မြှုပ်ထားလုိုက်ပါတယ်။ တနေ့တနေ့ အလုပ်လုပ်ရင်း ကုန်လွန်စေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကလဲ ကျွန်တော်အခုလုို လုပ်ငန်းတစ်ခု မြန်မြန်ပြန်ပြီး လုပ်နုိုင်လာလုို့ ကျေနပ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိသားစုကတော့ ပြောပြနေစရာတောင်လုိုမယ် မထင်ပါဘူး သိပ်ကုိုကျေနပ်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကုို နုိုင်ငံခြားသွားစေချင်တဲံ အဒေါ်လဲ ရန်ကုန်ရောက်လာပြီး ကျွန်တော့်အတွက် ကျေနပ်ကြောင်း ကျွန်တော့်ကုို ဒီလုိုဖြစ်စေချင်တာ ကြာပြီဆုိုကြောင်း လာပြောပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေကတော့ ငါမပြောဘူးလား အဆင်ပြေမှာပါဆုိုတဲ့ သဘောနဲ့ ကျွန်တော့်ကုို ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေပါတယ်။ ကျောင်းတက်မယ့် ကိစ္စကုို ခဏရွှေ့ထားလုိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ တက်ချင်နေပါသေးတယ်။ အိမ်ကလဲ ငွေရမယ့် အလုပ်ဆုိုတော့ အလုပ်အရင်လုပ်ပါလုို့ ပြောလာပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် တသက်လုံး ငွေမရတာပဲလုပ်လာတာပါ ငွေရတာလဲ တခါတလေ လုပ်သင့်တာပေါ့လေ။ ဇူလုိုင်လမှာ လုပ်ငန်းသစ်လေးစရင်း စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။
အလုပ်ကသိပ်မများပါဘူး။ များသောအားဖြင့် စာဖတ်နေရတာများပါတယ်။ ဝန်ထမ်းက ၃ ယောက်ပဲရှိသေးတော့ တပုိုင်တနုိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ စုိုးရိမ်စရာလဲ မရှိပါဘူး။ တခြားလုပ်ငန်းတွေ ခေါင်းထဲဝင်လာပါတယ်။ စိတ်ကူးလုို့လဲကောင်းပါတယ်။ အဖေနဲ့ အမေကတော့ အလှမ်းကျယ်ပြီး အလယ်လတ်မှာ စုိုးလုို့ ကျွန်တော့်ကို ဒါလေးပဲ အရင်လုပ်ပါဦးသားရယ်ဆုိုပြီး ချော့ပြောကြပါတယ်။ ဝန်ထမ်း ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ကတော့ အတော်တော်ပါတယ်။ မျက်နှာလွှဲလုို့ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၂ ယောက်ကတော့ သိပ်စိတ်တုိုင်းမကျပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စောင့်ကြည့်နေလုိုက်ပါတယ်။ လူဆုိုတာ စောင့်ကြည့်သင့်တာကုိုး မှတ်ချက်ကုို စောင့်ကြည့်ပြီးမှ ပေးတာ ပုိုသဘာဝကျတယ်ဆုိုတာ ကျွန်တော့်အရင်လုပ်ငန်းက ကျွန်တော့်ကုို သင်ပေးလုိုက်ပြီးပါပြီ။ အရင်လုပ်ငန်းက မှားခဲ့တာမျိုး ဒီလုပ်ငန်းမှာ အမှားမခံတော့ပါဘူး။ အတွေ့အကြုံကုို ကောင်းကောင်း အသုံးချတတ်နေပါပြီ။ တချို့ကတော့ ကျွန်တော်အလုပ်ပြန်စနေတာ သိတောင် မသိကြပါဘူး။ ဒါလဲကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်လဲ မပြောတော့ပါဘူး။ ထားလုိုက်တယ် လူသိနေစရာလဲ လုိုမှမလုိုတာကုိုး။
အလုပ်က အခက်အခဲလေးတွေ နည်းနည်းကြုံရပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ဖြုတ်လုိုက်ပါတယ် အသစ်တစ်ယောက်ခန့်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေ စိပ်လာပါတယ်။ ဖုန်းဖုိုးတော့ အတော်ကုန်ပါတယ်။ skype မှာ ပြောရတာ အဆင်မပြေလုို့ ဖုန်းခေါ်ရတာများပါတယ်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖုို့ ရုန်းကန်ရတဲ့ အချိန်တစ်ခုလုို့ ပြောလုို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်နားရတယ်လုို့ သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ အချိန်ပြည့်နီးပါး အစည်းအဝေးတွေအတွက် စီစဉ်ရပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ဟုိုဘက်က customer တွေက ကျွန်တော့်ကုိုတွေ့ချင်တယ် ဆုိုလာပါတယ်။ ကျွန်တော် ပတ်စ်ပုို့ သက်တမ်းတုိုးထားလုို့ မလာနုိုင်သေးကြောင်းပြောရပါတယ်။ ဟုိုဘက်မှာ သူ့ဘာသာ ကြည့်ရှင်းလုိုက်လုို့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဝန်ထမ်းအသစ်က အားကုိုးရပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် အားဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ယောက် ထပ်ခန့်ဖုို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်။ ဒီကြားတယ် နောက်တစ်ယောက်က ထွက်ဖုို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ် ကျွန်တော် မထုတ်သေးပါဘူး စောင့်ကြည့်နေပါသေးတယ်။ စက်တင်ဘာလမှာ လုပ်ငန်း အရှိန်တင်ဖုို့ လုံးပန်းနေရပါတယ်။
ဒီဇုိုင်နာကုို ဖြုတ်လုိုက်ပါပြီ။ အဆင်မပြေလွန်းလုို့ပါ။ တုံးလွန်းတယ်လုို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သူကလဲ ကျွန်တော်က pressure ပေးလွန်းတယ်လုို့ ထင်နေပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဖြုတ်လုိုက်ပါတယ်။ အသစ်ချက်ခြင်းခန့်လုိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရင် တွန်းအားပေးတာမျိုး မလုပ်ပါဘူး အလုပ်ပြီး မပြီးစစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အလုပ်သမားတွေ အလုပ်လုပ်မလုပ် ကျွန်တော် ထမကြည့်ပဲသိပါတယ်။ သူတုို့နားမလည်ပါဘူး။ သူတုို့ တချိန်လုံးရေသာခုိုလုို့ရတဲ့ နေရာကလာခဲ့လုို့ ကျွန်တော်ကပုံမှန် အလုပ်လုပ်တာကုို ကျပ်တယ် ထင်တာပါ။ ထားလုိုက်ပါတယ် ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး။ မလုပ်နုိုင်ရင် လုပ်နုိုင်တဲ့သူကုို အစားထုိုးရတာ ကျွန်တော့်ကိစ္စပါ။ လုပ်ငန်းအောင်မြင်လာပါတယ်။ အလုပ်တွေ ပုိုများလာပါတယ်။ ဝင်ငွေပုိုကောင်းလာပါတယ်။ သီတင်းကျွတ်မှာ အလှူအတန်းတော်တော်လုပ်နုိုင်ပါတယ်။ ငွေဆုိုတာ ရတော့လဲ ပျော်စရာတော့ အကောင်းသားပေါ့။ ဒါပေမယ့် မိန်းမောမနေပါဘူး။ ငွေအကြောင်းကုို ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်။ အဲဒီ့အတွက် မသာယာပါဘူး။ လုပ်မြဲလုပ်ပါတယ် လုပ်ငန်းတုိုးတက်တာကုိုတော့ ဝမ်းသာပါတယ်။
ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူး အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ အချိန်ုကုန်နေရတာပါပဲ။ မန္တလေးက မိတ်ဆွေတွေက လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုကုို ကျွန်တော်နဲ့လုပ်ဖုို့ စလာပါတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ အချိန်ဆင်းရဲလွန်းပါတယ်။ အဲဒီ့အတွက် ခဏစောင့်ပေးပါလုို့သာ ပြောနုိုင်ပါတယ်။ တတ်နုိုင်သလောက်တော့လုပ်ပေးပါတယ်။ ဝန်ထမ်းအသစ်ထပ်ခန့်ဖုို့ အင်တာဗျူးတွေလုပ်ပါတယ်။ စင်ကာပူကလဲ ကျွန်တော့်ဆီကုို project တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပေးပါတယ်။ နားချိန်မရှိပါဘူး။ အချိန်ပြည့် စဉ်းစားနေရပါတယ်။ အမေတောင်ကျွန်တော့်ကုို နေ့ရောညရော အလုပ်လုပ်နေလုို့ ကျန်းမာရေးထိခုိုက်မယ်ဆုိုပြီး ခဏခဏသတိပေးလာတယ်။ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး လုပ်မြဲအတုိုင်းဆက်လုပ်ပါတယ်။ မန္တလေးနဲ့အလုပ်အတွက်လဲ အချိန်ကုိုရအောင် ဖဲ့ပေးပါတယ်။ အဆင်ပြေချင်ပါတယ် ဘဝမှာ အချိန်တွေကုို အလကားအကုန်မခံချင်ပါဘူး။ အလုပ်လုပ်နေရတာကုို သဘောကျပါတယ်။ စဉ်းစားရတာကုို နှစ်သက်ပါတယ်။ တသက်လုံးလဲ စဉ်းစားတဲံ အလုပ်ပဲလုပ်လာတာပဲလေ။ ကုမ္ဗဏီအသစ်အတွက် နာမည်ပေးတာ အခုထိ မငြိမ်သေးပါဘူး။ ပေးလုိုက်မကြိုက်လုိုက်ဖြစ်နေလုို့ နာမည်မရှိပဲ ဒီအတုိုင်းလုပ်နေတာပါ။ အရင်အဟောင်းကုို ခဏအစားထုိုးပြီး သုံးနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးပတ်မှာတော့ နာမည်အသစ်ကုို သဘောကျလုို့ ပေးလုိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ့အတွက် ပြင်ဆင်ရပါသေးတယ်။ (မှတ်ချက် ဗေဒင်မေးခြင်း ကိစ္စမပါဝင်ပါ :D)
ဝန်ထမ်းအသစ်တွေထပ်တုိုးပါတယ် စုစုပေါင်း ၆ ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ တစ်ယောက်က အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆုိုလုိ့ ခွင့်ပေးလုိုက်ရပါသေးတယ်။ သိပ်တော့ထွေထွေထူးထူး မရှိပါဘူး။ ၂၃ နှစ်လောက်ကင်းကွာနေတဲ့ ကျွန်တော့်ညီတွေနဲ့ ကျွန်တော် ပြန်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့နေရာသာ မတူတာပါ သောက်တဲ့နေရာမှာတော့ သွေးကစကားပြောပါတယ် နေ့တိုင်းသောက်။ ဒီဇင်ဘာလမှာ ကျွန်တော့်ညီတွေအပြင် ကျွန်တော့်အဒေါ်တစ်ယောက်လဲ ရောက်လာပါတယ်။ ဧည့်သည်များတဲ့လဖြစ်သလုို ပွဲလမ်းသဘင်များလုို့ အကုန်အကျအတော် များတယ်လုို့ဆုိုနုိုင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ညဘက် ဒင်နာတွေနဲ့ကုန်တာပါ။ တနေကုန်အလုပ်လုပ် ညနေစောင်းတာနဲ့ တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်ကလာခေါ်ပြီး အပြင်ဆက်သွားကြပါတယ်။ အိမ်ကုိုတောင် တန်းပြီး မပြန်ဖြစ်တာများပါတယ်။ အလုပ်ကတော့ တော်တော်များပါတယ်။ နေ့တုိုင်းနီးပါး အစည်းအဝေးရှိတယ်လုို့ ဆုိုနုိုင်တဲ့လလဲဖြစ်ပါတယ်။ ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ဟာ ကျွန်တော်ထင်သလောက် မဆုိုးဝါးပါဘူး။ နေလုို့ကောင်းပါတယ်။ တုိုးတက်မှုတွေရှိပါတယ်။ ကုသုိုလ်ကံကောင်းလာတယ်လုို့ ဆုိုနုိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၀မှာတော့ ဒီ့ထက်ပုိုပြီး အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ အဆင်ပြေချင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်လုို့လဲ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်အဆင်ပြေသလုိုပဲ ကျန်တဲ့သူတွေ အားလုံးကုိုလဲ အဆင်ပြေပါစေလုို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ၂၀၁၀ မှာ အားလုံး အားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ပြီး ဆန္ဒနဲ့ဘဝ တထပ်တည်း ကျနုိုင်ကြပါစေ။
Posted by zeRoTraSh at 11:00 AM
certain condition cube said...
2010 ရောက်ပြီနော် - ကဲ ဘယ်လိုလဲ ---
Long Novel (3)
အမေပေးတဲ့ နာမည် မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ် ကွန်ပျူတာ စသုံးကာစကထဲ ကသုံးလာတဲ့ Nick မို့လို့ မြတ်မြတ်နိုးနိုး သုံးနေတာပါ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ဘာမှန်းမသိပါ လက်ကျောမတင်းတဲ့ ငပျင်းပေါ့ ဒီ Blog ကိုလက်ဆော့ရင်း ရပ်မရတော့လို့ ဆက်ရေးနေတာပါ . . .
ထွင်နိုင်ရင် ထွင်၊ မထွင်နိုင်ရင် သေ
တောက် . . . ဒီ Connection နဲ့ကတော့ကွာ
My Essential Bookmarks
လူကြီးမင်း နဲနဲတော့ ပွါးခဲ့ပေးပါ
လာ . . . တူတူသွားစို့
~ မွှေဖြစ်တဲ့လူစာရင်း ~ မောင်လှ ညီလင်းဆက် မေငြိမ်း ညလေး ကေသွယ် July Dream Joyful4All Saturn God ပန်ဒိုရာ မိုးစက် ညိမ်းညို ကိုစိုးထက် ရွက်မွန် Rapster88 မခင်မင်းဇော် မျှားပြာ ညိမ်းညို ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ပီကေ MM Thinker နစ်နေမန်း နတ်သမီးလေး လေးမ ရန်အောင် ချစ်လေပြေ Acube